Raad Raac News Online – Shil Gaari Oo Ka Dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ee Muqdisho + Sawiro
Shil Gaari Oo Ka Dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ee Muqdisho + Sawiro
Inta La Ogyahay Labo ruux ayaa ku dhimatey mid kalana waa uu ku dhaawacmey kadib markii baabuur si xowli ah ku socday uu ka baxay wadada Maka Al-Mukaarama isla markaana uu ku dhacay Bohol weyn oo ku taala Agagaarka Isgooska Dabka ee magaalada Muqdisho.
Labada Qof ee ku dhimatey Shilka ayaa la Sheegey in mid ka mid uu ahaa Engieerada Dhismaha ee Caanka Ah muqdisho Halka Qof kale la sheegey inuu ahaa qof rayid ah oo wadada marayey .
Wadada Maka Almukaramah ayaa hada waxaa ku soo badanayey dhismooyinka waxana dhismayaashaas intooda badan haatan ay noqdeen hotelo ay degaan dadka ka yimaada wadamada qurbaha ah.
Sidoo kale wadada Maka Al-mukaramah iyo wadooyinka kale ee magaalada muqdisho ayaa lagu arkayaa Baabuurta raaxada oo ah kuwa aad ugu soo badanayaa caasimada muqdisho iyadoo qaarkood ay watana dhalinyaro aan aqoon fiican u laheyn kaxeynta baabuurta .
Dadka Reer Muqdisho ayaa Wadada Maka Al-mukaramah waxa ay ku xasuustaan Shilkii gaari nooca N3-ga ah uu kula gadoomey Taageerayaasha kubada cagta ee Degmada Wadajir halkaas oo ay ku dhinteyn dhalinyaro fara badan sidoo kalena ay ku dhaawacmeyn dhalinyaro aad u fara badan.